फ्लोरेन्स क्याथेड्रल | यात्रा समाचार
Florencia यो इटालीको सबैभन्दा आकर्षक शहरहरू मध्ये एक हो। धेरै व्यक्ति देश भरि लामो यात्रामा दुई वा तीन दिन जान्छन्, तर म साँच्चिकै लामो समय सम्म बस्न सिफारिस गर्दछु। तपाईंसँग हेर्ने धेरै छ! वा साधारणतया, तपाईले बाइक भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ र सडकमा हिड्न जान सक्नुहुन्छ।
शहरको प्रतीकात्मक भवन मध्ये एक हो फ्लोरेन्स क्याथेड्रल। यो प्यारा हो, तर चल्ती छैन। सब भन्दा चाखलाग्दो कुरा जुन यो छ र म गर्न नदिन सिफारिस गर्दछ यसको घुमाउरो भित्री भागबाट गुम्बा तिर जान्छ र त्यहाँबाट, त्यसपछि शहर र यसका वरपरका दृश्यहरूको आनन्द लिइन्छ।
यसको निर्माण १२ 1296 in। मा शुरू भयो र १ 1436 मा समाप्त भयो। त्यतिखेर त्यस्ता स्मारक भवनहरूको निर्माणमा समय लाग्यो। के तपाईंले पढ्नुभयो? पृथ्वीको खम्बाहरू? केन Follet द्वारा। पुस्तकले यी सुविधाहरूका साथ भवन निर्माण गर्ने प्रक्रियाको लामो र जटिल प्रक्रियाको वर्णन गर्छ।
क्याथेड्रल जुन हामी आज देख्छौं, बाट सान्ता मारिया डेल फिओर, अघिल्लो चर्चले यो शहरको बढ्दो जनसंख्याको लागि पर्याप्त पर्याप्त प्रदान गरेको छैन। नयाँ भवन द्वारा डिजाइन गरिएको थियो अर्नोल्फो डि कम्बियो, एक टस्कन वास्तुकार र मूर्तिकार जसले पलाज्जो भेचियो र चर्च अफ सान्ता क्रोसको डिजाइन पनि गर्नुभयो। तर अर्नल्फोको तीन दशकको काम पछि १ 1310१० मा मृत्यु भयो, त्यसैले यो पोस्टले यसलाई लिए Giotto र आफ्नै मृत्युमा, १ 1337 मा, उनी उनका सहायक थिए Andrea Pisano प्लेसहोल्डर छवि, जो अगाडि गए।
दस वर्ष पछि पिसानो ब्ल्याक डेथबाट मरेका कारण निर्माण कार्यहरू सम्हाल्ने तिनीहरू केवल आर्किटेक्ट थिएनन् र समय बित्दै जाँदा अन्य वास्तुकारहरूले डिजाइन अनुसरण गरे र आफ्नै योगदान पनि गरे। अन्तमा, पोप यूजीन IV ले मार्च १1436 मा यसलाई पवित्र गरे। चर्च कस्तो छ?
यो एक बेसिलिका हो केन्द्रीय नाभको साथ चार खाडी र सामान्य डिजाइनको साथ ल्याटिन क्रस। यो एक विशाल मन्दिर हो, को ,,8.300०० वर्ग मीटर, १ 153 मिटर लामो र meters 38 मिटर चौंडा। करिडोरहरूमा मेहराब २ 23 मिटर अग्लो र छ गुम्बजको उचाई ११114.5..XNUMX मीटर छ। र यो गुम्बज आश्चर्यजनक छ क्याथेड्रलको निर्माण सुरु भएको सयौं शताब्दी पछि पनि, यसको अनुपस्थितिमा यो स्पष्ट थियो। त्यहाँ केवल मोडल थियो, यसको आयामहरू र अष्टकोणीय डिजाइनमा दिखावा गर्ने।
गुम्बज अद्भुत हुनुपर्छ र उसले अन्तमा त्यसको हेरचाह गर्यो ब्रुनेलेस्ची। ऊसँग पनि एक पाइला अगाडि बढ्ने लक्जरी थियो र गुम्बजको शीर्षमा फ्ल्यासलाइट राख्न हिम्मत गरे। तसर्थ, शंक्वाकार छतलाई तामाको बल र क्रसले टुक्रिएको थियो जसमा पवित्र अवशेषहरू थिए।
यो सजावटको साथ गुम्बज ११114.5..1600 मिटरको अन्तिम उचाईमा पुगेको थियो। बिजुलीले तामाको बललाई १ XNUMX०० मा टक्यो तर पछि त्यसको अझ ठूलो ठाउँमा प्रतिस्थापन गरियो। यो विश्वास गरिन्छ कि यो नयाँ तामाको बल पनि एक युवकले डिजाइन गरेका थिए लियोनार्डो दा भिन्सी, त्यो त्यसबेला ऊ कार्यशालामा काम गर्दै थियो जुन यसको हेरचाह थियो। जे भए पनि, अद्भुत।
अर्कोतर्फ, मूल कला विभिन्न कलाकारहरूको कामको परिणाम हो र केही मूल कामहरू फ्रान्ससो आई डि मेडिसीको समयमा हटाइएको थियो जब यसलाई पुनर्जागरण शैलीमा परिवर्तन गरियो। त्यहाँ धेरै ट्विस्टहरू र मोडहरू थिए १ th औं शताब्दी सम्म यस कवच लगभग झलकै थियो।
आज एफएडे नव गोथिक शैलीमा छ, मा सेतो, हरियो र रातो संगमरमर। यो घण्टा टावर र बप्स्टरिरीसँग मेल खान्छ र सरल छ। विशाल काँसाका ढोकाहरू ती शताब्दीको पालोमा राखिएको थियो जुन १ to औं २० देखि २० औं, र भर्जिनको जीवनका दृश्यहरू प्रस्तुत गर्दछन्।
त्यहाँ तिनीहरूमाथि मोज़ेकहरू र केही राहतहरू तल छन्। बाह्र प्रेरितहरू र बीचमा, भर्जिन र बाल येशूसँग घरको ढोकाको माथिल्लो कोठा छ। र गुलाब विन्डो र टायम्पानम बीच फ्लोरेन्टाइन कलाकारहरूको busts संग अर्को गैलरी।
यदि बाह्य सरल छ र धेरै क्रोमेटिक छैन भने, त्यहि आन्तरिक हो। यो विशाल र लगभग खाली छ त्यसैले हेर्न धेरै छैन, तर यो प्रवेश गर्न स्वतन्त्र छ त्यसैले त्यहाँ सँधै मानिसहरू हुन्छन्। तिनीहरू चम्कन्छन्, हो, तिनीहरूको Colored 44 रंगीन गिलास विन्डोजहरूतिनीहरूको समयको लागि ठूलो, पुरानो र नयाँ करारबाट दृश्यहरू चित्रण गर्दै। को crypt हो यो भ्रमण गर्न सकिन्छ र तपाईंले रोमन भग्नावशेष, अर्को पुरानो क्याथेड्रलको भग्नावशेष र ब्रुनेलेस्चीको आफ्नै चिहान देख्नुहुनेछ।
गुम्बज जर्जियो वासारी द्वारा अन्तिम न्यायको दृश्यले सजाइएको छ, यद्यपि प्राय जसो उनका एक विद्यार्थी जुक्करी द्वारा चित्रित छन्। र मैले पहिले भनें, पोष्टको सुरूमा, भित्र सबै चीजको शीर्षमा चढ्नुहोस् र बाहिर जानुहोस् तपाईले गर्न नहुनु भनेको के हो। तपाईंसँग चढ्न केवल शक्ति छ २463 चरणहरू र अरु साँघुरो बाटोमार्फत घुमाउरो जहाँ तपाईं अर्को तर्फ जाने मानिसहरू भेट्नुहुन्छ।
राम्रो कुरा के हो भने तपाईं भ्रमण उल्टाउन सक्नुहुन्छ किनकि डोम अन्य समयमा खुल्छ। यो बिहान :8::30० देखि pm बेलुका सम्म गर्छ यो छुट्टिमा बन्द छ।
व्यावहारिक जानकारी फ्लोरेन्सको क्याथेड्रल भ्रमण गर्न
घण्टा: खुला सोमबार, मंगलबार, बुधवार र शुक्रवार बिहान १० देखि साँझ 10 बजेसम्म। बिहिबार बिहान १० देखि साँझ :5: ;० सम्म खुल्छ, महिनामा निर्भर हुन्छ; शनिबार यो बिहान १० देखि 10::3। सम्म खुला हुन्छ र आइतवार र छुट्टीहरुमा यो १::30० देखि :10::4:45 सम्म खुल्दछ। ईस्टर र क्रिसमस जनवरी १ र on मा बन्द छ।
मूल्यहरु: टिकटको लागी प्रति वयस्क १eयूरो हुन्छ। And र ११ बीचका बच्चाहरूलेeयूरो र नाबालिगहरूले भुक्तान गर्दैनन्। टिकटमा क्याथेड्रल, ब्याप्टिस्टी, क्रिप्ट, घण्टा टावर र म्यूजियो डेला ओपेराको भ्रमण सामेल छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » Florencia » फ्लोरेन्स क्याथेड्रल